1n4148: Dhammaan Ku Saabsan Silicon Ujeedada Guud Diode | Qalab bilaash ah
Waxaa jira noocyo badan oo diode semiconductor, oo leh codsiyo aad u kala duwan. Laga soo bilaabo aaladaha hagaajiyaha, iyada oo loo marayo Zener, illaa LED -yada iftiinka bixiya. Maqaalkan waxaan danaynaynaa qayb elektaroonik ah la taaban karo, the 1n4148 diode ujeeddo guud. Waxay noqon doontaa midda aan ku lafagurno marka la eego sifooyinkeeda waxaanan tusi doonaa qaar ka mid ah codsiyada suurtagalka ah.
1n4148 waa a unug silikoon yar taasi waxay qarisaa siro waaweyn oo ay tahay inaad ogaato. Qayb wax badan ku soo kordhin karta mashaariicdaada haddii aad jeceshahay DIY elektiroonig ah ama aad tahay soo -saare ...
1 Waa maxay diode semiconductor?
1.2 Noocyada diode
2 1n4148 diode ujeeddo guud
2.1 Taariikhda Soomaaliya
2.2 Soo -saaridda iyo baakadaha 1n4148
2.4 Halkee laga iibsan karaa 1n4148
Waa maxay diode semiconductor?
Un diode waa aalad semiconductor Waxay u dhaqantaa sidii beddel-dawlad-adag iyo hal dhinac oo hadda ah. In kasta oo ay jiraan waxyaalo ka reeban, sida LED ama IR diode, oo soo saara hirarka elektromagnetic. Xaaladda kowaad, iftiin muuqda oo midab leh, ama shucaaca infrared. Dhinaca kale, maqaalkan, maadaama aan ka hadli doonno 1n4148, waxaan danaynaynaa oo keliya kuwa u dhaqma sidii carqaladeeyayaasha hadda jira.
Ereyga diode wuxuu ka yimid Giriigga, oo macnihiisu waa "laba siyaabood". Iyada oo ay taasi jirto, waxa ay samayso ayaa si cad uga soo horjeeda, taas oo ah, waxay xannibaysaa socodka hadda jihada kale. Si kastaba ha noqotee, haddii qalooca IV ee dabeecadda lagu qiimeeyo, waxaa la arki karaa inay ka kooban tahay laba gobol oo kala duwan. Hoosta farqiga iman kara qaarkood waxay u dhaqmi doontaa sida wareegga furan (oo aan qabanayn), iyo korkeeda sida wareegga gaaban oo leh iska caabin koronto oo aad u yar.
Dabayshaani waxay leeyihiin a ururka oo ah laba nooc oo semiconductor P iyo N. Waxay kaloo leeyihiin laba boosteejo oo isku xira, anode (terminal togan) iyo cathode (terminal negative). Iyada oo ku xidhan habka hadda loo adeegsado, laba habayn ayaa la kala saari karaa:
Polarization toos ah: marka socodka hadda socdaa dhaafo. Tiirka taban ee batteriga ama korontada ayaa ka celiya electrons -ka bilaashka ah ee N crystal -ka waxaana elektaroonada loo jiheeyaa dhanka isgoyska PN. Tiirka togan ee baytariga ama ilku wuxuu soo jiitaa elektaroonnada qiimaha leh ee ka soo baxa P crystal (godadka u riixa dhinaca isgoyska PN). Marka kala duwanaanshaha suurtagalka ah ee u dhexeeya terminaalka uu ka weyn yahay farqiga suurtagalka ah ee aagga lacag -ka -qaadista, electrons -ka bilaashka ah ee N crystal wuxuu helayaa tamar ku filan oo uu ku boodi karo godadka ku jira kristal P iyo socodka hadda socda.
Kala -soocidda gadaal. Xaaladdan oo kale, kala -soociddu waxay noqon doontaa mid ka soo horjeedda, taas oo ah, isha ayaa u bixin doonta jihada ka soo horjeedda, taasoo keenaysa in hadda elektaroonigu soo dhex maro aagga P oo ku riixo elektaroonnada ukunta. Terminalka wanaagsan ee baytariga ayaa soo jiidan doona elektarooniga aagga N, tanina waxay soo saari doontaa falliiq u shaqayn doona sidii insulator -ka u dhexeeya isgoysyada.
Halkan waxaan diiradda saareynaa hal nooc oo diode ah. Sheygu wuxuu ku kala duwan yahay photodiodes ama LEDs, iwm.
Qaybahan waxaa la abuuray iyada oo ku saleysan mabda'a Tijaabooyinka Lee De Forest. Kuwa ugu horreeya ee soo ifbaxay waxay ahaayeen makiinado faaruq ah oo waaweyn ama tuubooyin faaruq ah. Ampoules galaas Thermionic oo leh electrodes taxane ah oo u adeegay sidii aaladahaan, laakiin soo saaray kuleyl aad u badan, aad u cunay, weynaaday, oo u dhaawici kara sida nalalka iftiinka. Markaa waxaa la go'aamiyay in lagu beddelo qaybaha gobolka ee adag (semiconductors).
Diodes, sida 1n4148, ayaa leh codsiyada badan. Waxay yihiin aalado aad caan ugu ah wareegyada elektiroonigga ah ee tooska ah iyo sidoo kale qaar hadda jira oo beddelaya. Dhab ahaantii, waxaan hore u aragnay sida gudaha sahayda korantada waxay fuliyeen hawl aad u muhiim ah markii ay ka socdeen AC una socdeen DC. Taasi waa dhinacooda sida dib -u -hagaajiyeyaal, maadaama ay beddelaan signalada sinusoidal -ka ee mid joogto ah oo ah qaab -ka -soo -jiidasho iyagoo xannibaya hadda jihada ka soo horjeedda.
Waxay kaloo u shaqayn karaan sida furayaasha korontada ku shaqeeya, sida ilaaliyaasha wareegga, sida soo -saareyaasha qaylada, iwm.
Diodes -ka waxaa lagu kala saari karaa korantada ay u dulqaadan karaan, xoogga, maaddada (tusaale: silikoon), iyo sifooyin kale. Qaar ka mid ah noocyada ugu muhiimsan Waxay yihiin:
Dioctor: waxaa loo yaqaannaa calaamad hoose ama xiriir dhibic. Waxaa loogu talagalay in loo adeegsado soo noqnoqosho aad u sarraysa iyo hadda hooseysa. Waxaad ka heli kartaa labaduba waxay ka samaysan yihiin germanium (marinka 0.2 ilaa 0.3 volts) iyo silikoon (marinka 0.6 ilaa 0-7 volts). Iyada oo ku xidhan doping -ka aagagga P iyo N waxay yeelan doonaan iska caabin kala duwan iyo sifooyin suus ah.
Diode hagaajiye: waxay ku kaxeeyaan si toos ah oo kaliya, sidaan hore u sharxay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo danabyada ama hagaajinta calaamadaha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa noocyo kala duwan, oo leh dulqaadyo kala duwan marka loo eego danab hadda jira oo la taageero.
Zener diode: waa nooc kale oo aad loo jecel yahay. Waxay oggol yihiin in qulqulku u socdo si gadaal ah waxaana badiyaa loo isticmaalaa aaladaha xakamaynta. Haddii ay si toos ah u eexanayaan waxay u dhaqmi karaan sida diode caadi ah.
LED. Tan waxaa mahad iska leh hannaanka korontada oo godadka iyo elektarooniyuhu dib isugu noqdaan si ay u soo saaraan iftiinkan marka si toos ah loo kala leexiyo.
Schottky diode: Waxaa loo yaqaanaa soo kabasho degdeg ah ama sidayaal kulul. Badanaa waxay ka samaysan yihiin silikoon waxaana lagu gartaa hoos u dhac danab aad u yar (<0.25v qiyaastii). Taasi waa, waqtiga beddelka wuxuu noqon doonaa mid aad u gaaban.
Diode Schockley: In kasta oo ay iska shabahaan magaca, haddana wuu ka duwan yahay kii hore. Waxay leedahay isgoysyada PNPN waxayna leedahay laba dawladood oo xasilloon oo suurtagal ah (xannibaadda ama caqabad -la’aanta sare iyo ka -gudbinta ama caqabad -yaraanta).
Diode Recovery Recovery (SRD): waxaa sidoo kale loo yaqaanaa kaydinta lacag -bixinta, waxayna leedahay awood ay ku kaydiso lacag garaaca garaaca wanaagsan waxayna adeegsan kartaa garaaca xun ee calaamadaha sinusoidal.
Diode Tunnel- Waxaa sidoo kale loogu yeeraa Esaki, waxaa loo adeegsadaa sidii degmooyin adag oo deg -deg ah oo adag maadaama ay ka shaqayn karaan nanoseconds. Taasi waa sababta aagga xaalufinta aadka u khafiifka ah iyo qalooca halkaas oo gobolka iska -caabbinta taban uu hoos u dhaco marka korantadu kordho.
Varactor diode: waa ka aqoon yar yihiin kuwii hore, laakiin sidoo kale waxaa loo adeegsadaa mashaariicda qaarkood. Varicap -ka waxaa loo adeegsadaa sidii koronto -dhaliye la xakameeyo korontada. Waxay u shaqaysaa si liddi ku ah.
Laser iyo IR photodiode: Waxay yihiin diod -yo la mid ah LED -yada, laakiin halkii ay ka dhalin lahaayeen iftiin, waxay soo saaraan mowjad elektromagnetic aad u gaar ah. Maaddaama ay noqon karto iftiin monochromatic ah (laser) ama infrared (IR).
Diode Cabudhinta Danab ee Ku -meelgaarka ah (TVS)- Waxaa loogu talagalay in la dhaafo ama la leexiyo hirarka korantada oo laga ilaaliyo wareegyada dhibaatadan. Waxay kaloo ka difaaci karaan dheecaanka korontada (ESD).
Daawooyinka dahabka ah ee dahabka ah: waxay yihiin diod -yada loo yaqaan doped oo la isticmaalayo atamka dahabka ah. Taasi waxay siinaysaa faa'ido, taasina waa inay haystaan ​​jawaab degdeg ah.
Peltier diode: unugyada noocan ahi waxay u oggolaanayaan urur shaqaale oo awood u leh inuu soo saaro kulayl iyo qaboojin hadba dhinac. Macluumaad dheeraad ah.
Diode Duufaan: Waxay la mid yihiin Zener, laakiin waxay ku hoos shaqeeyaan ifafaale kale oo loo yaqaan saamaynta barafka.
kuwa kale: waxaa jira kuwo kale sida GUNN, kala duwanaansho kuwii hore sida OLED -yada shaashadaha, iwm.
1n4148 diode ujeeddo guud
El diode 1N4148 Waa nooc silikoon caadi ah oo beddela diode. Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo adduunka elektiroonigga. Sidoo kale waa mid aad u waarta, maadaama ay leedahay tilmaamo aad u wanaagsan in kasta oo ay qiimo jaban tahay.
Magaca ayaa raacaya Magacaabista JEDEC, waana mid aad waxtar ugu leh beddelka codsiyada illaa ku dhawaad ​​100 Mhz inta jeer ee leh soo kabashada gadaal oo aan inta badan dhaafin 4ns.
Texas qalabku waxaa la abuuray 1960 diode 1n914. Diiwaangelinteeda ka dib sannad kadib, in ka badan darsin soo -saare ayaa helay xuquuqdii ay ku samayn lahaayeen. Sannadkii 1968 -kii 1N4148 ayaa imaan doonta diiwaanka JEDEC, iyadoo la bilaabayo in loo adeegsado codsiyada milateri iyo warshadaha xilligaas. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira kuwo badan oo soo saara oo iibiya aaladahaan iyagoo wata magaca 1N4148 iyo 1N914 hoostooda. Farqiga u dhexeeya labaduba waa ficil ahaan magaca iyo wax yar oo kale. Kaliya waxay ku kala duwan yihiin qeexitaankooda hadda jira.
Soo -saaridda iyo baakadaha 1n4148
Movilideas - 50 Unug ...
1n4148 diode caadi ahaan wuu yimaadaa ku hoos jira DO-35, oo leh baqshad galaas axial ah. Waxaad sidoo kale ku heli kartaa qaabab kale sida SOD oo loogu talagalay kor -u -qaadista dusha, iwm.
Sida for pinout, waxay leedahay oo kaliya laba biin ama boosteejo. Haddii aad fiiriso xarigga madow ee diode -gaan, dhammaadka ugu dhow xarigga madow wuxuu noqon doonaa cathode, halka dhammaadka kale uu noqon doono anode.
Macluumaad dheeraad ah - xogta macluumaadka
Sida for tafaasiisha laga bilaabo 1n4148, badanaa waa:
Danab hore ugu badan: 1v ilaa 10mA
Awoodda burburka ugu yar iyo dib -u -daadinta hadda jirta: 75v at 5 μA; 100 V at 100 μA
Waqtiga ugu soo kabashada gadaal: 4ns
Baaxadda awoodda ugu badan: 500mW
Halkee laga iibsan karaa 1n4148
Haddii aad rabto iibso diode 1n4148 Waa inaad ogaataa inay tahay aalad aad u raqiis ah, oo waxaad ka heli kartaa dukaamada elektaroonigga ee gaarka ah ama internetka meelaha sare sida Amazon. Tusaale ahaan, waa kuwan talooyin:
Boorso kooban oo leh 300 diodood, oo ay ku jiraan 1n4148
25 cutub oo ah 1n4148 diode hagaajiye
Xirmooyinka 50 ee 1n4148
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » 1n4148: wax walba oo ku saabsan diode ujeeddo guud
Micrometer: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato aaladdan